Nyocha akwụkwọ na -edeghị ede
Sacramento, nke Antonio Soler dere
Nke okporo osisi na-adọta bụ nkọwa nke physics. Site n'ebe ahụ nne nke esemokwu anyị niile. Ọnọdụ dị oke egwu na mmadụ na-ejedebe na-esonyere mmetụta ahụ na-enweghị nkwụsị nke magnetism ma ọ bụ inertia. Ezi na ihe ọjọọ na-ekpughe katalọgụ ha nke ụkpụrụ na ọnwụnwa na ihe niile ...
Nnukwu oriọna, nke Maria Konnikova dere
Onye edemede tupu ọ bụrụ onye na -egwu egwuregwu poker, María Konnikova bịara n'egwuregwu kaadị site na mkpali nke onye na -akọ akụkọ ọ bụla nke chọrọ ịbịaru akụkọ akụkọ ọhụrụ iji mee ka ọnọdụ gbara ya gburugburu. Anyị na -agbakwunye okwu ahụ doctorate ya na akparamaagwa na anyị na -ahụ ụdị ọkaibe nke Pelayo ...
Ire ọkụ na -adịghị anwụ anwụ nke Stephen Crane nke Paul Auster dere
Anụ ọhịa West, dị ka njikọta nke ala nna America na nhazi, gbasapụrụ echiche ya, amaghị ihe ya na ụdị ya gaa na nnukwu mba nke nwere mmetụta na nkwenye dị iche iche gbasara ihe niile. Ọ dịghị mgbe a ga -enyo ihe dị iche iche enyo enyo na a ga -ehiwe ya n'ime obodo dịka ọ dị taa ...
Peeji1 Peeji2 ... Peeji18 Ọzọ →